१० टिप्स स्मार्ट र प्रिय बुहारी कसरी बन्ने ? – Khula kura
१० टिप्स स्मार्ट र प्रिय बुहारी कसरी बन्ने ?
– सकारात्मक माहौल बनाउनुहोस् । सधै खुसी एवं प्रशन्न रहने प्रयास गर्नुहोस् । विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुनुहोस्